Xaflad 2da Shariif si wadajir ah u qabteen oo ka dhacdey Hotel Plaza City ee Magaalada Muqdisho – idalenews.com
Hoteelka City plaza ee magaalada Muqdisho ayaa caawa lagu soo gabagabeeyey xaflad weyn oo lagu taageerayo musharaxa Shariif Sheikh Axmed. Isu imaatinka kulankii caawa ee Hotel Plaza City ee Magaalada Muqdisho ayaa u muuqdey mid Shariif Xasan Sheikh Aadan ugu muujinaayo taageero Madaxweynihii waqtigiisa dhamaadey inuu mar kale dib loo soo doorto.
Hotelka xafladu ay ka dhaceysey ayaa waxaa ku sugnaa masuuliyiin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen dowaldii waqtigeeda uu dhamaaday oo kala ah Xildhibaan Shariif Xasan Sheekh Aadan, Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ahaa wasiirkii gaashaandhiga xukuumadii C/wali Gaas, Wasiirkii arimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdisamad, Wasiirka Xanaanada Xoolaha Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen, Xubno ka mid ah Baarlamaanka Somaaliya, Ra’iisul Wasaarahii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, Marwooyinka Sheekh Shariif iyo saraakiisha ciidamada.
Shariif Xasan oo meesha ka hadley ayaa sheegey in berito ay wacdaro muujin doonaan, isagoo kaftamaayana waxuu yiri, aniga iyo saaxiibkeey shariif Axmed taago ayaan isu dhigi jirney laakiin iskuma fogaan jirin” taasoo dadka qaarkii ay u arkeen isbaheysigii jalaafada iyo isbaarada uu markale dib u soo noqdey.
Guud ahaan maanta Magaalada Muqdisho waxay aheyd maalintii ebed ugu mashquul badneyd, iyadoo ay jireen gaadiid iyo mootooyin lagu xardan sawirada musharaxiinta, banaanbaxyo kala duwan oo musharaxiintu soo abaabuleen ay ka dhaceen, waxaase intaasi sii dheeraa kala iibsiga qaadka gaarey heerkiisii ugu sareeyey lacago tiro badan magaalada lagu arkaayey. Isbedelkaas oo dhan ayaa dhacaayo maalin ka hor inta aan la qaban doorashada Madaxweynaha Soomaaliya
Berito ayaa waxaa xarunta dugsiga sare ee Booliiska Xamar ama Scoula Polizia ka dhici doona doorashada Madaxweynaha Soomaaliya, waxaan aad loo adkeeyey amaanka goobta doorashada iyo weliba isu socodka gaadiidka xaafadaas gala.
154 Xildhibaan oo Xaflad Prof Xasan Sheekh Maxamuud ku weheliyey maanta Hotel Safaari iyo Saaxiibadii 2dii shariif oo ka baaqsadey kulankii Hotel Plaza City